काठमाडौंका अस्पतालमा दिनभर चक्कर, गरिबलाई पाइलै पिच्छे ठक्कर
२०७८ जेठ ९ गते १७:३४ देव सिंह
तीन दिनदेखिको निरन्तर ज्वरो । शरिरको असाध्यै दुखाई । जेठ १ गते अकस्मात मलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या आयो । अक्सिजनकाे लेभल नाप्न मसँग अक्सोमिटर थिएन । साथीहरुको सहयोगले तत्काल १३ सय ५० रुपैयाँमा अक्सिजन खरिद...
सँगै ह्याप्पी वर्थ डे, श्रद्धाञ्जली र बधाई
२०७८ जेठ ७ गते ११:२८ सन्तोष तिमल्सिना
मोबाइल तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेटको माध्यमबाट आफूले प्राप्त गरेका सूचना, आफ्नो विचार, फोटो, भिडियो लगायतका सामाग्रीहरु आफन्त, साथीभाई र शुभेच्छुहरु माझ आदानप्रदानको लागि प्रयोग गरिने माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाल भनिन्छ । वेबसाइट एवं इन्टरनेट माध्यमद्वारा प्रत्यक्ष...
लगानीको ४० प्रतिशतसम्म दैनिक कारोबार गरौं, आईपीओ भर्न नछोडौं- लगानीकर्ता रौनियारको टिप्स्
२०७८ जेठ ६ गते १७:५० छोटेलाल रौनियार
काठमाडौं । दोश्रो बजारमा लगानी गर्दै हुुनुुहुन्छ भने राम्रो कम्पनी छानेर कारोबार गर्नुस् । तपाईंले बजारमा जति लगानी गर्नुभएको छ वा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म कारोबार गर्ने गर्नुहोस् । र, बाँकी रहेको...
आज विहान कार्यालय जाने क्रममा धेरै दिन पछि मेरे एकजना बैंकमा काम गर्ने पुरानो साथी भेट् भयो । धेरै दिनपछि भेट भएकोले म खुशीले गद्गद् हुदै उसको हालखवर सोध्न थाले । के छ यार...
सेयर बजारमा नलागेको भए म अहिले सडकमा हुन्थें
२०७८ जेठ १ गते १०:०५ छोटेलाल रौनियार
काठमाडौं । २०३० सालको कुरा हो । सायद म करिब १५ वर्षको थिएँ । र, कक्षा १० मा पढ्दै थिएँ । म ‘क्विज कन्टेक्स्ट’ र स्पेलिङ्ग कन्टेक्स्टमा एकदमै इन्ट्रेष्टेड थिएँ । र, कतिपय प्रतियोगितामा भाग...
‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यको व्यवहारः ५० हजारभन्दा कम पैसा हुनेले बैंकिङ सेवा नलिनु
२०७८ वैशाख ३१ गते १२:२१ शिव सत्याल
काठमाडौं । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘…लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण…’ गर्ने भनिएको छ । यस्तै, संविधानको धारा ४ मा नेपाल राज्य समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो...
निषेधाज्ञामा पनि सेवाग्राहीलाई सेवा दिन तल्लीन छौंः निलेशमान सिंह प्रधानकाे विचार
२०७८ वैशाख ३० गते १२:३८ विकासन्युज
सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था वाहेक सबै संघ संस्था बन्द छन् । यो बेला आम सर्वसाधारण र अन्य संस्थाहरूका लागि पनि डिजिटलमा बढी...
के हेरेर बसिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनुस् न
२०७८ वैशाख २९ गते १६:२५ सुशिल घिमिरे ‘त्रैलोक्य’
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार । म एक आम नागरिक । हजुर बसेकै देशको एक बासिन्दा । हजुर मलाई चिन्नुहुन्न । तर देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले र जनताको नाताले अप्रत्यक्ष रुपमा म हजुरलाई चिन्दछु । किनकि म...
काठमाडौं । जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले आगामी तीन हप्ता दुःख सहेरै भएपनि घरभित्र बसिदिन आग्रह गरेका छन् । उनले आगामी तीन हप्ता नेपालको लागि अत्यन्तै कठिन अवस्था छ रहेकोले आम नेपालीलाई घर भित्रै बस्न आग्रह...
कोभिड दोस्रो लहरमा सरकारः दिएन राहत, मागेन आर्थिक सहयोग
२०७८ वैशाख २८ गते १५:३१ शिव सत्याल
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नेपालमा भित्रने खतरा बढेपछि संघीय सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि साउनभर देशव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो । लकडाउन लागू हुने अघिल्लो दिन (चैत १०, २०७६ मा) नै संघीय सरकारले...
नयाँ सरकार कसरी गठन हुन्छ ?
२०७८ वैशाख २८ गते १३:४२ सुजन दाहाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विश्वास गुमाएका छन् । यो संगै संविधानको धारा ७७ (ख) बमोजिम उनी पदमुक्त भएका छन् । विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेको र १५ जना सांसद...
रेल यात्राका तथाकथित कथा, पानी जहाजको सफर कहाँ गयो प्रधानमन्त्रीज्यू ?
२०७८ वैशाख २७ गते १५:४७ शेरबहादुर देउवा
माननीय सभामुखज्यू कोभिड–१९ को महामारीका कारण धेरै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । म यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माहरुको चीर शान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । विभिन्न...
महामारीमा आर्थिक वृद्धि कसरी गर्ने ? अर्थविद् केशव आचार्यको विचार
२०७८ वैशाख २७ गते ११:३३ केशव आचार्य
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको ४ प्रतिशतको अनुमान खासै महत्वाकांक्षी होइन । यही समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा...
कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा खासै असर पर्दैन: पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको विचार
२०७८ वैशाख २६ गते ११:३९ रामेश्वर खनाल
हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संकट भोगिरहेको छौं । मार्च २०२० देखि सुरु भएको यो भाइरसको असर हामीले अझै कतिसम्म भोग्नु पर्ने हो अनुमान लगाउन कठिन छ । यो महामारीका बिचमा विभिन्न समयमा लकडाउन...
कोरोनाको कहरमा सबैतिर निषेधाज्ञा छ । यो बेला भौतिक रुपमा आफन्तजन तथा साथीभाइसँग भेट्नु भनेको निशेघाज्ञा उल्लंघन गर्नु हो । र, जानीजानी अर्कालाई कोरोना सार्न खोज्नु पनि हो । कोरोनाले मान्छेलाई सताउन थालेदेखि देश...
विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । दोस्रो लहर सुरु भएसँगै सरकारले निषेधाज्ञा पनि जारी गरिसकेको छ । कोरोनाको समयमा विश्वमा दुई मोडल लागु भए । एउटा अमेरिकाका निवर्तमान...
संचारमाध्यम नै खारेज गर्ने गरी बनाइएका अलोकतान्त्रिक कानुन सर्वथा अस्वीकार्य छ
२०७८ वैशाख २० गते ११:२० विपुल पोख्रेल
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूका लागि आज महत्वपूर्ण दिन हो । आज संसारभर प्रेस स्वतन्त्रताको महत्वका बारेमा चर्चा गरिँदैछ । सन् १९९३ मा नामिवियाको विण्डहकमा एउटा सम्मेलन भएको थियो, जसमा वरिष्ठ पत्रकार, पत्रकारिताका प्राध्यापकहरू...
तिम्रो धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ?
२०७८ वैशाख १८ गते १८:३७ शिव सत्याल
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव...
आगामी वर्षको बजेट कस्तो बनाउने ? शेखर गोल्छाको विचार
२०७८ वैशाख १२ गते १६:०२ शेखर गोल्छा
पहिले कहिल्लै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो...
पुनर्निर्माणकाे ६४ महिनाः यस्तो छ प्रगतिको फेहरिस्त, सुशील ज्ञवालीको विचार
२०७८ वैशाख १० गते १६:०० सुशील ज्ञवाली
२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको आज ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । सर्वप्रथम उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं । भूकम्प गएको ६...
« अघिल्ला 12345 … 21 पछिल्ला »